Meelaha Carbide ee Shiinaha ee loogu talagalay Carbide Rotary Burr Blanks soo -saarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Xinhua
Waxaan soo saarnaa oo bixinnaa dhammaan noocyada carbide -ka bannaan ee loogu talagalay burrs rotary carbide, ku soo dhowow weydiinta, waxaan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood, Hordhaca darajooyinka maaddada carbide -ka
*Awood u lahaanshaha farsamaynta biraha kala duwan (oo ay ku jiraan biraha daminta) iyo walxaha aan biraha ahayn sida marmar, jaad iyo laf. Iyada oo ay adag tahay ilaa HRC70 ,.
*Si aad u beddesho giraangir yar oo wax lagu shiido marar badan, wax wasakh boodh ah lama soo saarin.,
*Tayada mashiinka wanaagsan iyo hagitaan sare oo ku habboon mashiinnada godadka caaryada ee kala duwan oo leh saxnaan sare;
*Nolosha adeegga dheer, 10 jeer aaladaha birta xawaaraha sare leh iyo 200 jeer giraangirta yar -shiidka ee adkaysiga.
*Way fududahay in la maareeyo oo la shaqeeyo. Ammaan leh oo la isku halleyn karo, awood u leh inuu yareeyo xoojinta shaqada iyo hagaajiyo xaaladda shaqada;
*faaiido dhaqaale oo aad u sareysa, ayaa laga yaabaa inay 10% hoos u dhigto qiimaha habsocodka isku dhafan.
Caadi ahaan, xawaaraha wareegga ee qalabka korontada ama qalabka pneumatic waa inuu noqdaa 6000-50000 daqiiqaddii.
Isticmaalka nabdoon, burrs rotary carbide waa in si sax ah loo xiraa inta lagu jiro hawlgalka, si looga fogaado quudinta si isdaba -joog ah, dhagaxa gadaal ayaa ka roon. Si aad indhahaaga ugu ilaaliso muraayado ilaaliya isla markaana aad uga hortagto jibbadu inay mar qudh -qudh noqoto
1: Dhimista cidhifyada tooshka, burrs iyo khadadka alxanka ee shubka, foorjarka iyo qaybaha alxanka;
2: Dhamee mashiinnada noocyada kala duwan ee caaryada birta ah;
3: Dhamee goynta orodka gawaarida gawaarida;
4: Iskudhisid, isku -duubnaan iyo soo -gudbinta noocyada kala duwan ee mashiinnada;
5: Dhamee mashiinnada dusha sare ee daloolka gudaha ee qaybaha mashiinnada;
6: Farshaxanka farshaxanka ee dhammaan noocyada biraha ama kuwa aan birta ahayn;
Waxaan aqbalnaa dhammaan cabbirrada la habeeyay ee meelaha bannaan ee carbide, fadlan nala soo xiriir.
Qaabka Qaabka Nooca M M0313X03-25 3 13 3 38 X
Hore: Carbide Rotary Burr SM Qaab -Qabka Qaabka
Xiga: Baalasha Goynta Filterka Sigaarka
Meelaha Carbide Burr
Carbide Rods for burr rotary
faylka Rotary carbide oo bannaan
Shiineyska Rotary Burrs
tayo sare leh carbide rotary burr China
Meelihii Rotary Burr
Carbide Rotary Burr SK Qaab -Qababka Koone leh 90 °
Carbide Rotary Burr SA Qaab -Silinder Silsilad
Carbide Rotary Burr SE Qaab -Oval Qaab